Ụbọchị kachasị mma nke 24 nke Atụmatụ Ebumnuche Ndị Nwụrụ Anwụ Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ụbọchị kachasị mma nke 24 nke Atụmatụ Echiche Nwụrụ Anwụ Maka Ndị Nwoke na Ụmụ nwanyị
Ị hụla ndị mmadụ na ụdị ụbọchị igbu egbu a? Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ ndị na-adị ọhụrụ n'ihe banyere ụbọchị nkwụsị nke igbu egbugbu bụ ndị na-enweghị obi ụtọ maka iwepụ ihe ha depụtara.
A pụrụ iji ihe eji egbu egbu ụbọchị nke igbu egbu iji kwuo banyere ọtụtụ ihe. Ọnwụ ahụ na-anọchite anya ụfọdụ nti vibes nke na-ekwu banyere ndị hụrụ n'anya bụ ndị furu efu. E nwere ike iji egbugbu kwuo maka ncheta, ọnwụ, mkpụrụ obi, nloghachi, Mexico, ime mmụọ na nloghachi. Ụbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ nwere ike iji mee ememe ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ nke ga-agafe. Na omenala Mexico, ọ bụ egbu egbu nke ghọworo onye a ma ama.
Ụbọchị nke Ụdị Ebumnuche Ndị Nwụrụ Anwụ na-agbanwe site n'otu ebe gaa n'ọzọ ọzọ. E nwere ụbọchị dị iche iche nke ndị nwụrụ anwụ, ha nwekwara ihe ha pụtara. Echiche bụ na Ụbọchị Ndị Nwụrụ Anwụ pụtara ọnwụ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ejiri anya anya buru ibu. Ụbọchị nke Ndị Nwụrụ Anwụ nwere ike ịmịta n'ọtụtụ ụzọ na ha na-ejedebe na nkọwa dị oke mkpa ị ga-ahụ n'anya. Ụbọchị igbu egbu egbu nwere ike ịbụ ihe ncheta banyere onye nwụrụ anwụ nakwa na anyị niile kwesịrị ibi ndụ a n'ụzọ zuru ezu. Atụmatụ nke Ụbọchị Nwụrụ Anwụ nwekwara ihe ha pụtara dị ka ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ.
1. Ụbọchị Ọkpụkpọ Ọnwụ Ọdachi
2. Ụbọchị Aka nke Ọnwụ Nwụrụ Anwụ
Taa, anyị na-ahụ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta ìhè site na ihe dị ịtụnanya #day #of #the #dead tattoo designs.
3. Ụbọchị nke ọnwụ egbu egbu
Ịbịakwa ụbọchị a na-anwụ anwụ na-eme ka ọtụtụ anụ dị iche iche na-arụ ọrụ. I nweghị ike ịgọnahụ na egbu egbu a nwere ihe dị iche na ya.
4. Ụbọchị ike nke egbu egbu
Mgbe ụmụ nwanyị na-egbu ụbọchị igbu ụbọchị, ha na-eche mmetụta a nke ịrụpụta ihe. Kedu ka ị na-esi achọ ụdị ụdị egbu egbu a nke ghọworo otu egbugbu kasị mma #designs si n'ebe ahụ.
5. Ụbọchị mara mma nke egbu egbu
Anyị ahụwo ndị na-akwa ákwá na-abanye n'ụbọchị egbu egbu n'ihi na ha adịghị njikere maka ya. Lelee egbugbu a ma gwa anyị na ọ na-adọrọ uche gị.
6. Ụbọchị egbu egbu
Enwere ọtụtụ ihe mere ị kwesịrị iji nwee ụbọchị a dị egwu nke egbu egbu. Jiri nlezianya lee ha anya ma hụ ihe kachasị mma i nwere ike inweta maka onwe gị.
7. Ụbọchị aka nke egbu egbu
E nwere ọtụtụ aghụghọ nke ụbọchị igbu egbu dị ka nke a. Ọ bụghị ụdị ụdị igbu a na-amasị gị? Ụmụ nwanyị ga-ahụ ya n'anya karị.
8. Ụbọchị dị egwu nke egbu egbu
Ụbọchị igbu egbu egbu aghọwo ụdị ụdị egbugbu ị na-enweghị ike ileghara n'apata ụkwụ gị. Ọ na - eme mkpọtụ tupu ị nwee ike ikwu okwu.
9. Ụbọchị na-awụ akpata oyi n'ahụ ọnwụ
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi edozi ụbọchị ịtụnanya nke igbu egbu. Ma ị bụ nwanyị maọbụ nwoke, eji egbu egbu a dị mma.
10. Laa azụ ụbọchị igbu egbu
Ụmụ mmadụ amalitela iji ụbọchị igbu egbu azụ. Ọ bụrụ na ị dị njikere maka igbu egbu a, ọ ga-adịrị gị mfe inwe mgbanwe nke ga-agbanwe ụzọ ị dị.
11. Azụ ụbọchị igbu egbu
Ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọ dị mkpa na ị ga-egbu egbu egbu ahụ nke ga-eji obi ike gosipụtara ụbọchị azụ nke igbu egbu.
12. Eji ụbọchị egbu egbu
Onu ubochi nke onwu egbugbere anya abiala otu ihe eji egbu egbu nke ichotara. Ị ga-enwe ekele maka ya.
13. Ndụ na ụbọchị nke egbu egbu
Buru umu nwanyi aka ma lee otua ogbugbu a si eme ihe n'azu. Ụbọchị igbu egbu egbu nwere ike ịchọta ihe kachasị mma mgbe e tinyere ndụ na ya dị ka nke a.
14. Ụbọchị egwu nke egbu egbu
Anụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-acha anụnụ anụnụ na-esi ike iwepu kama nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe esemokwu mgbe ị na-eche echiche ịbịaru ụbọchị igbu egbu dị ka nke a.
15. Ụbọchị zuru oke nke ọnwụ egbu
Ụbọchị zuru ezu nke igbu egbugbu dị jụụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ isi guzo n'ìgwè ahụ, gịnị kpatara na ị gaghị egbucha egbugbu a n'ahụ gị?
16. Ụbọchị egwu nke igbu egbu egbu
Ụbọchị igbu egbu egbu aghọwo ihe onye ọ bụla ga-enwe mmasị karịsịa karịsịa mgbe e gbakwunyere egwu na ya.
17. Ụbọchị oyi na-egbu egbu
Nhazi ụbọchị nke igbu egbu egbu na-aga na ọkwa ọzọ. Gini mere ị gaghị enweta ụbọchị oyi nke egbu egbu dị ka nke a? Ọ naghị efu gị ego iji nweta ya.
18. Ụbọchị a hụrụ n'anya nke egbu egbu
Ị bụ onye ga-edozi ụdị ụdị ụbọchị igbu egbugbu ị chọrọ. Maka inwe ụbọchị igbu egbu, onye ọ bụla nwere ike ịnweta nke a.
19. Ụbọchị mara mma nke egbu egbu
Ọ bụghị naanị nhazi nke ụbọchị nwụrụ anwụ nke ị ga-achọ. Agba a na-eji mee ihe bụkwa ihe ị ga-ebu ụzọ tụlee tupu ị gaa maka egbugbu mara mma dịka nke a.
20. Ụbọchị zuru oke nke egbu egbu
Ọ bụrụ na ọnyà egbu egbu adịghị mma mgbe ị na-achọ ụbọchị zuru oke nke egbu egbu, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewepụta oge ma hụ otu n'ime ndị kasị egbu egbugbu ndị nwere ike inyere gị aka na egbu a.
21. Ụbọchị egbu egbu
Onye na egbu egbu nke nwere ike ime egbu egbu egbu bụ akụkụ dị egwu nke ụbọchị ọ bụla egbu egbu. Ọ bụrụ na onye egbugbu gị adịghị mma, ị gaghị enwe ike igbu egbugbu a dị ka nwanyị.
22. Ụbọchị mara mma nke egbu egbu
E nwere ọtụtụ ndị tattooists online maka gị ịchọta ma nweta oge a mara mma nke nwanyi igbu egbu. Ihe niile ọ na-ewe bụ obere oge na ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ntolite.
23. Ụbọchị nwanyi nke egbu egbu
24. Ụbọchị igbu egbu egbu na oke ubu
egbu egbu ebighi ebina-adọ aka mmaegbu egbu egbudi na nwunyeakwara obiỤdị ekpomkpaegbu egbu osisi lotusegwu egwuima ima mmannụnụEgwu ugomma tattoosGeometric Tattoosaka mma akandị na-egbuke egbukeọdụm ọdụmrip tattoosmehndi imeweaka akaAnkle Tattoosegbu egbuegbugbu egbugbuzodiac akara akaraudara okooko osisiegbugbu maka ụmụ agbọghọenyi kacha mma enyiUche obiụkwụ akaenyí egbu egbuegbu egbu hennaakara ntụpọokpueze okpuezeakpị akpịngwusi pusindị mmụọ ozin'olu oluarịlịka arịlịkaegbu egbu maka ụmụ nwokeọnwa tattoosNtuba ntughariegbu egbu okpuụmụnne mgbukoi ika tattooegbu egbu diamondazụ azụna-egbu egbuagbụrụ eboaka akaechiche egbugbuegbu egbu mmiri